शिकारी ब्वाँसो रहेकाे जनावर निकट सम्बन्ध हुँदै कसरी बन्यो हाम्रो कुकुर – Kaur web
Home/समाज/शिकारी ब्वाँसो रहेकाे जनावर निकट सम्बन्ध हुँदै कसरी बन्यो हाम्रो कुकुर
शिकारी ब्वाँसो रहेकाे जनावर निकट सम्बन्ध हुँदै कसरी बन्यो हाम्रो कुकुर
admin 11/14/2020	समाज Leaveacomment9Views
चैत कुमारी भन्छिन मैले गरेको काम किन लोप हुन पुग्याे होला
लुम्बिनी विकास कोषको ध्यान लुम्बिनी गुरूयोजना पूरा नगर्दै कपिलवस्तु गुरूयोजनातर्फ मोडियो
समुदायमा गुमनाम रहेकाे चैत्य चिनाएर आफैं गुमनाम भए तिब्बतीय भिक्षु
आज कुकुर तिहार। मान्छेको असल जनावर साथी पुज्ने दिन। तर के कुकुर र मान्छेबीच सधैं यस्तै निकट सम्बन्ध थियो? यिनीहरू कहिलेदेखि घरमा पालिन थालिए? कुकुरलाई संसारभरि मान्छेको निकट साथीका रूपमा लिइन्छ। घरको रक्षा गर्नु, चोरबाट खबरदारी गर्नु, प्रहरीलाई अपराधी पत्ता लगाउन सघाउनु वा उहिले–उहिले शिकारीलाई जंगलमा साथ दिनु सामान्य हो। योबाहेक वैज्ञानिकहरूले कुकुर र मान्छेबीच भावनात्मक सम्बन्ध पनि भएको बताएका छन्।
मतलब, मान्छेलाई पीडा हुँदा कुकुरले पनि पीडा अनुभूत गर्न सक्छ। मान्छेको खुसी र दुःखलाई महशुस गर्न सक्ने खुबी कुकुरमा हुन्छ। हलिउड फिल्म ‘अल्फा’ ले कुकुरको विकासक्रमलाई सरल ढंगले चित्रण गरेको छ।
उनीहरूको आत्मीयता देखेर अरू मान्छे पनि चकित खान्छन्। ब्वाँसोलाई विश्वास गर्न थाल्छन्। यही ब्वाँसो समयक्रमसँगै कुकुर भएको मानिन्छ। फिल्मले कुकुरको विकासक्रम झल्काउन केही काल्पनिक घटनाको सहारा लिए पनि हजारौं वर्षअघि जंगली ब्वाँसोबाटै कुकुरको विकास भएको हो भन्ने केही वैज्ञानिकहरूले पनि प्रमाणित गरेका छन्।
तीन वर्षअघि अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित कर्नल युनिभर्सिटी कलेज अफ भेटेरिनरी मेडिसनको एडम बोयको ल्याबरेटोरीले संसारका ३८ देशबाट ५ सय ४९ थरीका कुकुरको डिएनए परीक्षण गरी यो निष्कर्ष निकालेको थियो। यो नतिजा नेसनल एकेडेमी अफ साइन्सेसको जर्नलमा प्रकाशित भइसकेको छ।
घरपालुवा कुकुरको विकास कहिले र किन भयो भन्ने विषयमा धेरै बहस हुँदै आएका छन्, अनुसन्धानका लेखक एडम बोयकोलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले लेखेका छन्, मेरो विचारमा सबभन्दा पहिला हामीलाई यो विकास कहाँ भयो भन्ने थाहा हुनुपर्छ।
‘पछिल्लो अनुसन्धानले मध्य–एसियाको कुन देशबाट घरपालुवा कुकुर विकास भएको हुनसक्छ भनी हामीले पुर्खाको जरा पत्ता लगाएका छौं, समग्र विकासक्रम पहिल्याउनमा यसले नयाँ दिशा दिएको छ,’ उनले थपे। घरपालुवा कुकुरको पुर्खाको खोजीमा दत्तचित्त केही वैज्ञानिक भने एडम बोयकोको निष्कर्षसँग सहमत छैनन्।
बोयकोको आफ्नै तर्क छ। हो, बढीभन्दा बढी ठाउँबाट डिएनए संकलन गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘हामीले उत्तरी भियतनामका कुकुरको नमूना परीक्षण गरेका छौं, यो चिनियाँ सीमा नजिक नै पर्छ।
अमेरिकाकै लस एन्जेल्सस्थित युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाका रोबर्ट वेन पनि एडम बोयकोको निष्कर्षसँग सहमति राख्दैनन्। उनले डिएनएका पुराना अवशेषको अनुसन्धानबाट सन् २०१३ मै घरपालुवा कुकुरको विकास युरोपबाट भएको निष्कर्ष निकालेका थिए। अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीका ग्रेगर लार्सनले भने यो नतिजालाई ‘उपलब्धिमूलक’ भनी व्याख्या गरेका छन्।
उद्गम स्थलमा फरक मत रहे पनि कुकुर संसारकै पहिलो घरपालुवा जनावर हो भन्नेमा वैज्ञानिकहरू सहमत छन्। तर, मानिसले नियोजित रूपमै यसलाई आफ्नो साथी बनाएका होइनन् । वैज्ञानिकहरूको अनुमानअनुसार, मान्छे समूहमा बस्न थालिसकेका थिए। जंगलका ब्वाँसो आहारा खोजीमा मानव बसोबास छेउछाउ जान थाले। मान्छेले बढी भएर फालेका खानेकुरा उनीहरूको आहारा बन्दै गयो। पछि यो यति नियमित हुँदै गयो, मान्छेको समूह एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ चहार्दा पनि ती ब्वाँसो उनीहरूलाई पछ्याउन थाले।
मान्छेलाई पनि उनीहरूको साथ सहज हुँदै गयो। जंगल–जंगल भौंतारिँदा ब्वाँसोको साथले सुरक्षा अनुभूति भयो। त्यसैले, न मान्छेले तिनलाई लखेटे न तिनले मान्छेलाई पछ्याउन छाडे। यसरी मान्छे र कुकुर सँगै हुन थाले।
अहिले पनि कुकुरका पूर्खा ब्वाँसो छँदै छ। कतिपयले स्याललाई पनि कुकुरका पूर्खा मान्छन्। ब्वाँसो, स्याल र कुकुरको जैविक जात एकै मानिन्छ। यिनीहरू ‘क्यानिस’ वर्गमा पर्छन्। तर धेरै अनुसन्धानले कुकुरको विशेषता ब्वाँसोसँगै धेरै मिलेको देखाएको छ। वैज्ञानिकहरूले लगातार गर्दै आएको डिएनए र जीन परीक्षणबाट यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन्। धेरै परीक्षणमा त ब्वाँसो र कुकुरबीच सम्बन्ध गराएर स्वस्थ्य बच्चा जन्मिएका पनि छन्।
उनीहरू भन्छन्, कुकुरको पुर्खाको खोजी भनेको एक किसिमले मान्छेकै पुर्खाको खोजी हो। कुकुरको कथाले वास्तवमा हामीलाई मानवीय विकासक्रमकै नयाँ कथा थाहा पाउन मद्दत गर्छ। कुकुरका पूर्खाले हजारौं वर्षदेखि मान्छेका पूर्खा पछ्याउँदै आएका छन्।
पक्कै पनि। त्यसैले त हामी कुकुरसँग घनिष्ट छौं। संसारभर कुकुर साथी त छँदैछ, पहरेदार छ, सुरक्षाकर्मी छ। तर हामी नेपालीले जति आत्मसात अरू कसले गरेको होला! हामीकहाँ त कुकुरलाई फूलमाला लगाएर पूजा गर्ने चाड नै छ।
Previous चैत कुमारी भन्छिन मैले गरेको काम किन लोप हुन पुग्याे होला
Next ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਆਸਾਨ ਤੇ ਜਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀ ਕਦੇ ਨਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ !
यस पटक मौसमले साथ दिएपछि चियाको उत्पादन बढ्यो
इलाम, कात्तिक २७ । विगत वर्षको तुलनामा यस वर्ष (अन्तिम सिजन/अटम सिजन) को चिया बढेको …